UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOTYALO-MALI lwaseBelgium | IXESHA LOKUPHUMELELA 100% | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iBelgium, ukufudukela kwelinye ilizwe kwezoqoqosho ngokutyala imali yokuhlala eBelgium ngotyalo-mali eBelgium, ukuhlala ngokutyala imali eBelgium, ukuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBelgium nakwiVisa yeGolide
Sibonelela ngeenkonzo zokufudukela kwezoqoqosho eBelgium:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium
● Ubummi ngotyalomali oluvela eBelgium
● IVisa yegolide eBelgium
● Ipasipoti yesibini evela eBelgium
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Abameli bokuhlala ngokuTyala eBelgium Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eBelgium kunye nabarhwebi beepropathi zokuhlala kwiBelgium basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eBelgium kubonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eBelgium, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eBelgium, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo mali eBelgium, ukuhlala kwakhona kwesibini ngotyalomali eBelgium, ukuhlala kubini ngokutyala imali eBelgium, ubumi kunye nokuhlala kutyalo mali eBelgium. , Ukuhlala isigxina ngotyalo-mali eBelgium, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eBelgium, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eBelgium, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eBelgium, Ubummi ngotyalo-mali eBelgium, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eBelgium, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eBelgium, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eBelgium, ubumi bobabini ngotyalo-mali eBelgium, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali eBelgium, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali eBelgium, iinkqubo zoBumi bezoqoqosho eBelgium, Ubummi ngesikimu sotyalo mali eBelgium, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eBelgium, okwesibini ipasipoti eBelgium, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eBelgium, ipasipoti yesibini eBelgium, ipasipoti yesibini yesibini eBelgium, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eBelgium, ipasipoti yesibini yaseBelgium, ipasipoti yesibini yotyalo-mali eBelgium, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eBelgium, isicwangciso sesibini sepasipoti eBelgium, okwesibini Izicwangciso zepaspoti eBelgium, i-visa yegolide eBelgium, ii-visa zegolide eBelgium, iinkqubo ze-visa zegolide eBelgium, inkqubo ye-visa yegolide eBelgium, i-visa yesibini yegolide eBelgium, inkqubo yesibini yegolide yaseBelgium, i-visa yegolide yaseBelgium, ubumi kunye ne-visa yegolide eBelgium, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eBelgium, ubumi be-visa begolide eBelgium, isikimu segolide se-visa eBelgium, izikimu ze-visa zegolide eBelgium.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala eBelgium ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eBelgium lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 500,000
Intshayelelo iBelgium kunye nokuhlala ngokuTyala
Funda nzulu ngeBelgium
IBelgium inomgangatho wobomi ophakamileyo kunye nezikhundla phakathi kwezona zilishumi zilungileyo kwizikhombisi ezimbalwa ze-OECD's Better Life Index, kunye nobuninzi beyunithi yosapho ngaphezulu kwe-OECD yesiqhelo. Ngaphandle koko, ubukho behlabathi eBrussels bungowesibini ukuya eNew York, phantse amaziko ayi-10 asebenzisa oonozakuzaku abangama-1,500 3,000 kunye nesiseko esingaphezulu kwama-2,000 XNUMX aseYurophu kwimiyalelo ephambili yemibutho yehlabathi.
Ukuhlala ixesha elide eBrussels, kukho isigqibo esibanzi sokuqeshisa kunye nomnini ndawo kubandakanya indawo yokuhlala, kokubini ngaphakathi komzi oqokelelweyo we-19 kunye ne-suburbia, ukusuka kwii-studio condos ukuya kwi-manors. Fumanisa ubungakanani bamanqaku axabisekileyo kwisitishi sethu sokulala, umzekelo, apho uhlala khona eBelgium, imimandla yaseBrussels, okanye ufumane indlu eBelgium usebenzisa izixhobo zokulala zikaExpatica.
Ukuqwalaselwa kweklinikhi ephezulu kakhulu kufikeleleka ngokubanzi, kuphuculwe ziiklinikhi zonyango ezinkulu. Ikwajongwa njengexabiso eliphantsi kune-US, kwaye amaxesha amancinci okubamba abonisa ukuba iBelgium iyajika ibe yindawo enkulu yezonyango kushishino lokuhamba oluquka amazwe.
Ukuba ucinga ngokufudukela eBelgium, funda ukuba kutheni inkcubeko yaseBelgium yindawo efanelekileyo yokufudukela kwelinye ilizwe.
Izinto zokuthambisa zenkcubeko eyahlukeneyo zaseBelgium zinika ikomkhulu lalo iBrussels ixesha elineentlobo ngeentlobo zolawulo lwehlabathi kunye neeofisi kwisindululo sokunciphisa nakweyona ex-pat yangoku.
Likhaya le-European Union (i-EU), ukuphuma okufutshane kwimixholo eyahlukeneyo yelizwe, kwaye inezigunyaziso ezintathu (isiFrentshi, isiDatshi, nesiJamani) kunye nenethiwekhi yomhlaba wonke.
Kuyongezwe ukuhlala. I-Brussels, apho uninzi lwangaphambili lwe-pats luthatha isigqibo sokuzibeka ngokwalo, kubiza kakhulu kunamanye amakhomkhulu asentshona Yurophu, umzekelo, iLondon, iCopenhagen, iVienna, neZürich, ngokwexabiso leMercer yeNdawo yokuPhila. Ngapha koko, iBelgium yazisa ngesakhelo semoto esivulekileyo nesebenzayo sokulungelelanisa ukuhambisa, iimetro, kunye neemoto zekhebula, isenza kube lula ukuya esiphelweni seeveki zokujikeleza iBelgium. limited) okanye ubhabhe uye kwilizwe eliselumelwaneni. Xa kufikwa ekutyeni iziseko, ilizwe liyonwaba sisigqibo kunye nohlobo lweendawo zokutya. Inyaniso iyaxelelwa, izikhundla zaseBrussels phakathi kwezona ndawo ziphambili zaseYurophu ezisezidolophini kunye neenkwenkwezi ezininzi zeMicrosoft. Lilonke, isikhokelo seMichelin saseBelgium ngo-2016 sibonise iivenkile ezintathu ezinenqanaba leenkwenkwezi ezintathu, iindawo zokutyela ezingama-20 ezinenqanaba leenkwenkwezi ezimbini, kunye neendawo zokutyela ezili-117 ezinenkwenkwezi enye. Okwangoku, ukuxubana kokulindelwe okuphezulu kwintuthuzelo yemihla ngemihla kunye nothungelwano olumangalisayo lwehlabathi liphela, izikolo, kunye nemibutho eyahlukeneyo, ukongeza kwimiboniso ebalaseleyo yezigqibo zokutya, ukonwaba, kunye nokuhamba, kuthetha ukuba iBelgium ingaphezulu kokuma komhlaba ngokuchasene nezinye izinto ezibalulekileyo- Iindawo zokulala pat. Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, iBelgium ngumdlali ophambili weendleko zehlabathi: Iirhafu zaseBelgium zongeza ngaphezulu kwe-80% ye-GDP yayo, kwaye ngo-2014, ngokwe-World Trade Organisation, yayiyeyeshumi elinesithathu eyona ibalulekileyo ekuthumeleni ilizwe emhlabeni, kunye Urhwebo olunexabiso elingaphezulu kwe- $ 400 yezigidigidi. Oko kumalunga neepesenti ezi-2.5 zeemveliso zehlabathi ngokupheleleyo-ezoyikekayo kwilizwe elingaphantsi kwe-0.2 € yabantu bebonke.
Abantu baseBelgian abavunyelwanga luluntu: kwisigqibo sokugqibela sezopolitiko, i-89% yababhalisi abagqibeyo bavota-enye yezona ziphakamileyo kuwo onke amazwe angama-34 e-OECD kwaye aphezulu kakhulu kune-68% yesiqhelo. Ilizwe linenye yezona nkqubo zimiselweyo zedemokhrasi eziyimfuneko emhlabeni.
IBelgium ixhaphake kakhulu: Nokuba amaRoma Katolika, amaProtestanti, amaSilamsi, amaJuda, iAnglican, iOrthodox yamaGrike ziinkolo eziqondwa ngokupheleleyo, ngokweSaveyi yaseYurophu, ngaphezulu kwama-50% abemi abangazinikeliyo.
Abahlali baseBelgium batyebile kunesiqhelo: njengoko kubonisiwe yingxelo ye-OCED 2015, ubuninzi bemali yosapho bavavanywa nge-89,057, ngokuthe kratya kunesiqhelo se- € 84,546.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala ngokuTyala imali eBelgium
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala imali eBelgium
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseBelgium
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngokutyala imali eBelgium
Kutheni usiya kubuhlali ngokutyala imali eBelgium
IBelgium lelinye lawona mazwe aneempembelelo emhlabeni, ikomkhulu lawo iBrussels ibamba inani lamaziko abalulekileyo e-EU. Inqanaba lelizwe linemigangatho ephezulu yokuphila, imfundo ekumgangatho wehlabathi kunye nempilo, kunye nokunxibelelana ngokuthe ngqo nomoya ogqwesileyo kunye nokuhamba komhlaba. Enkosi kubulungu beSchengen, imvume yokuhlala yaseBelgium ikuvumela wena kunye namalungu osapho ukuba nifumane i-visa yokungena kulo lonke elaseYurophu.
Ukufudukela kosapho eBelgium
Emva kokuba ufumene imvume yokuhlala, amalungu osapho lwakho, kubandakanya iqabane lakho kunye nabantwana abaxhomekeke kuwe, banokufumana imvume yokuhlala esekwe kumanyano losapho.
Indawo yokuhlala ngenkqubo yotyalo mali eBelgium insite
Eyona khrayitheriya ibalulekileyo yobhaliso olusebenzayo lotyalo-mali lubonisa ukuba ishishini lakho liya kuba negalelo elibonakalayo kuqoqosho lwaseBelgium ngokwenza imisebenzi yasekhaya okanye ukufumana iimpahla okanye iinkonzo kwiinkampani zasekhaya. Unokubandakanya inkampani yaseBelgium yenkampani entsha yaseBelgium okanye inkampani yamanye amazwe. Ubude obuqhelekileyo benkqubo yesicelo ziinyanga ezi-3-8, ukuba onke amaxwebhu ayimfuneko angenisiwe.
Bonisa ukuba ishishini lakho liyasebenza, isicelo sakho kufuneka sibandakanye isicwangciso seshishini, kunye neshishini kunye nobungqina beenkcitho zeshishini, ubuncinci kwiinyanga zokuqala zokusebenza nenkampani yakho. Ipemethe ihlawulwe kwangaphambili kunyaka omnye kwaye ihlaziywa ngokwendlela oqhuba ngayo ishishini. Akukho mfuneko yasemzimbeni emva kokuba unikwe imvume. Unokufaka isicelo sokuba ngummi waseBelgium emva kweminyaka emi-3 yokuhlala, kwaye inkqubo ihlala izalisa iminyaka emi-2 eyongezelelweyo.
Imfuno zezemali zeBelgium
Ngexesha lonyaka wokuqala, kuya kufuneka uchithe malunga ne-150,000 yeerandi kwiindleko zakho zeshishini zaseBelgium, kubandakanya neendleko ezinje ngemirhumo yokurisayikilisha, iindleko zomthetho, ipropathi (ikhaya, iofisi, indawo yokusebenza, njl. Njl.) Yokuqeshisa kunye nabasebenzi. Kwithuba leminyaka emihlanu, ngaphambi kokuba ufumane ubumi, kufuneka ubale ama-euro ayi-5 kuphela.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eBelgium
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseBelgium kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha yeBelgium ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eBelgium ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eBelgium, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eBelgium kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela eBelgium okanye eGolden Visa yaseBelgium okanye kubummi ngotyalomali oluvela eBelgium okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eBelgium, sikunika isisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IBelgium okanye i-offshore, izibonelelo zabantu baseBelgium kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi kunye naseBelgium nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo kubemi baseBelgium:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali YeBelgium, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena YaseBelgium, abatyali mali abafudukela kwamanye amazwe abafikelelekayo eBelgium, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo mali eBelgium, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo mali eBelgium kunye nefemu yokubonelela ngokufuduka eBelgium
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eBelgium kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eBelgium ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eBelgium.
Iinkqubo zevisa zegolide eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini evela eBelgium ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eBelgium ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseBelgium ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu eBelgium ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali lwaseBelgium, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala imali eBelgium. Sihlangene kunye nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eBelgium abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eBelgium, befumana eyona mbuyekezo.
Ezona nkqubo zintle zokuhlala kwezindlu eBelgium ngotyalo mali kwizindlu nomhlaba eBelgium.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona eBelgium ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona nguGqwetha loTyalo-mali eBelgium kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu oluncedo malunga nokuhlala kwakho ngempumelelo ngotyalomali eBelgium. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali eBelgium kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eBelgium okanye eBelgium, ngokusekwe kwiziphakamiso eziza kwenziwa
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona kutyalo-mali lwaseBelgium kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala eBelgium kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo eBelgium, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili ngokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eBelgium kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu entsapho.
Inguqulelo kunye ne-apostile yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali eBelgium Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eBelgium kunye nevisa yegolide izokunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kwakhona nosapho lwaseBelgium alungele, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni baseBelgium.
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala imali eBelgium sivunyiwe, sabelana nawe ngeendaba ezimnandi kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngobumi ngeenkonzo zotyalo-mali eBelgium kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eBelgium:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zeBelgium azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezivela okanye eBelgium.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo mali zeBelgium azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eBelgium okanye kwi-espionage yemizi-nkqubo yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eBelgium.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eBelgium awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eBelgium.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali yeBelgium ayenzelwa abantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eBelgium.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali zeBelgium ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eBelgium.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeBelgium ayifumaneki kubantu baseBelgium abajongana norhwebo, ukugcinwa eBelgium, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali yeBelgium ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo yeBelgium ayizizo iinkolo zonqulo kunye nokunceda kwabo eBelgium.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Bheljiyam ayibonelelwa ngabantu abajongana nemifanekiso engamanyala eBelgium.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eBelgium abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eBelgium.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseBelgium nakwi-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eBelgium ukwamkelwa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eBelgium.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo yokuhlala eyiyo ngenkxaso yotyalo-mali eBelgium kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu eBelgium.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseBelgium, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eBelgium zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo eBelgium.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eBelgium exhasa abathengi kunye neentsapho zabo eBelgium.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBelgium kunye neearhente zomthetho zaseBelgium ezibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zokuphatha inkqubo yaseBelgium kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eBelgium nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eBelgium
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iBelgium, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eBelgium kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzelayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBelgium
Ukubala iindleko zokuhlala ngokutyala eBelgium nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseBelgium, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yaseBelgium kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa yeBelgium
Inkqubo yemvume yokusebenza eBelgium
Ukuhlala okwethutyana eBelgium
Indawo yokuhlala eBelgium
Izindlu zoonozakuzaku kunye neeNdlu zoonoRhulumente baseBelgium
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali eBelgium kunye nezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eBelgium ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufuduka nosapho lwakho uye eBelgium ngokutyala, thina njengeqabane lakho eBelgium, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eBelgium ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo mali eBelgium, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR naseBelgium, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseBelgium esenza ivenkile yokumisa enye eBelgium nakwamanye amazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nakwihlabathi liphela kumazwe ayi-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye nezorhwebo eBelgium ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala imali eBelgium ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokuzimanya eBelgium nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eBelgium okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eBelgium zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eBelgium
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eBelgium uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yobuqu eBelgium kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eBelgium, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eBelgium
Ngaba ufuna ukubonisana eBelgium, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eBelgium Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye fintech eBelgium okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Bheljiyam ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eBelgium ukuqala kwangoko eBelgium.
Iinkonzo zabasebenzi eBelgium
yethu Inkampani yabasebenzi eBelgium inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo eBelgium free.
Iinombolo zeFowuni eziBonakalayo eBelgium
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zaseBelgium kunye amanani abonakalayo eBelgium Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eBelgium
Accounting, ngenxa yenkuthalo eBelgium kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eBelgium
Ukuseta ishishini eBelgium
Emva kokuhlala ngokutyala imali eBelgium, ukuseta ishishini kwi Bheljiyam.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT apha ngezantsi eBelgium
Uyilo lwewebhu eBelgium
Uphuhliso lwezorhwebo eBelgium
Uphuhliso lwewebhu eBelgium
Uphuhliso lweBlockchain eBelgium
Uphuhliso losetyenziso eBelgium
Uphuhliso lweSoftware eBelgium
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBelgium
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni kwezisombululo zotyalo mali eBelgium kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iBelgium, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eBelgium ineearhente zokufudukela eBelgium. Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseBelgium kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalomali eBelgium libonelela ngezisombululo eziyimpumelelo zabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eBelgium, xa imvume yakho yokuhlala eBelgium ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseBelgium ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo-mali eBelgium. Ukuba useBelgium okanye uceba ukutyelela iBelgium, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eBelgium kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseBelgium. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanele ukuba kukhutshwe okanye kubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseBelgium.
Imibuzo ebuzwa qho-Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eBelgium
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eBelgium?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseBelgium ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBelgium ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eBelgium, ukuhlala kwenkqubo yotyalo mali eBelgium ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eBelgium, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eBelgium, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eBelgium kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eBelgium, abasebenza kwindawo yokuhlala efanelekileyo ngabameli botyalo mali eBelgium, kunye neefem eBelgium.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eBelgium | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eBelgium | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBelgium | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eBelgium | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eBelgium
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eBelgium?
Ubummi ngotyalo-mali lwaseBelgium, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseBelgium ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBelgium ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl.njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eBelgium, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseBelgium exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eBelgium, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eBelgium, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eBelgium Ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eBelgium, kunye neefemu zokubonelela ngokufudukela eBelgium.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eBelgium | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eBelgium | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eBelgium | Abatyali mali abafikelelekayo eBelgium | Abatyali mali abafikelelekayo kwilizwe laseBelgium | Iifemu zomthetho wofuduko olufikelelekayo eBelgium
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini eBelgium?
Ipasipoti yesibini eBelgium, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni beBelgium ngokutyala imali kuqoqosho lwaseBelgium ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eBelgium, inkqubo yesibini yepasipoti eBelgium exhaswa Iinkonzo zokundwendwela zesibini eBelgium, ngamagqwetha esibini eepasipoti eBelgium, amagqwetha esibini eepasipoti eBelgium kunye nabacebisi besibini abaphumelele ipasipoti eBelgium, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela eziseBelgium.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eBelgium | Iiarhente zokundwendwela zesibini eBelgium | Amagqwetha esibini epasipoti eBelgium | Igqwetha lesibini lokundwendwela eBelgium | Abacebisi bokundwendwela besibini eBelgium
Iyintoni inkcazo yevisa yegolide eBelgium?
I-visa yegolide eBelgium, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eBelgium ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseBelgium ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zevisa zegolide eBelgium, ngamagqwetha egolide aseBelgium, amagqwetha egosa aseBelgium kunye nabacebisi begosa baseBelgium, abasebenza kwiiarhente zevisa zaseBelgium.
Iinkonzo zevisa zegolide eBelgium | Iiarhente zevisa zegolide eBelgium | Amagqwetha egosa egolide eBelgium | Amagqwetha egosa egolide eBelgium | Abacebisi begosa begolide baseBelgium
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eBelgium?
Ubuncinci botyalomali lokuhlala ngokutyala eBelgium yi-EUR 500,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho eBelgium yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu eBelgium kunye neearhente eBelgium zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eBelgium kuyabiza?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali eBelgium kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eBelgium yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo woboniswano ngokuHlala kuTyalo-mali eBelgium, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yokuhlala kwizisombululo zotyalo-mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali eBelgium okanye i-visa yotyalomali eBelgium?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala eBelgium ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBelgium ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBelgium ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali eBelgium ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium ukusuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium ukusuka eBangladesh, Ukuhlala ngokutyala imali eBelgium ukusuka eIndonesia, Ukuhlala ngokutyala imali eBelgium ukusuka eSri Lanka, Ukuhlala ngokutyala imali eBelgium ukusuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBelgium ukusuka eIndiya kunye nokuhlala kwakhona. ngotyalomali eBelgium ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali yeBelgium
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngokuTyala imali eBelgium
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eBelgium
Ithala Leencwadi lasebukhosini laseBelgium (www.kbr.be/)
Icandelo loMphathiswa Wezoluleko (www.moniteur.be)
IBhanki yeSizwe yaseBelgium (www.nbb.be)
IOfisi yoTyalo mali lwangaphandle e-Flanders (www.ffio.com)
Ibhunga leNtlanganisela loLuntu lwaseFrance laseBelgium (www.ciuf.be/)
IPalamente yaseBelgian (www.fed-parl.be/)
IZiko leNkcukacha-manani kuZwelonke (http://statbel.fgov.be/)
Icandelo loMphathiswa Wokuqeshwa Nemisebenzi (www.meta.fgov.be/)
I-Federation of Chambers of Commerce kunye neBelgium
Icandelo loMphathiswa Wezimali (www.minfin.fgov.be/)
I-Senate yaseBelgian (www.senate.be)
I-Central Bank yaseBelgium.
IKomishini yeBhanki yezeBhanki nezeMali (www.cbfa.be)
INkundla ePhezulu yoLawulo lwaseBelgium (www.raadvst-consetat.be/)
Urhulumente wase-Belgian Federal (www.belgium.fgov.be/)
Igumbi labameli beBelgium (www.lachambre.be/)
I-Federal Planning Bureau (www.plan.be/)
Icandelo loMphathiswa Wezemicimbi Yezopolitiko (http://www.mineco.fgov.be/)
Umbutho wokunyusa ukuthengisa waseBelgian
Hlanganisa kwi ISebe lokufudukela eBelgium , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eBelgium